Maroantsetra : Voafehy ny aretim-pivalanana sy tazomoka -
AccueilSongandinaMaroantsetra : Voafehy ny aretim-pivalanana sy tazomoka
11/04/2018 admintriatra Songandina 0
Isan’ireo faritra nitondra faisana tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim farany teo ny faritra Analanjirofo, indrindra ny distrikan’i Maroantsetra. Ity farany izay dibo-drano ary nahiana ny hampirongatra ny valanaretina. Noho ny fandraisana andraikitry ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ireo mpiara-miombon’antoka anefa, dia voafehy ny aretim-pivalanana sy tazomoka. Nahafahana nisoroka izany ny fizarana fanafody fanadiovan-drano tamin’ireo olona nafindra toerana tamin’ireo toerana, fialofana sy ny ezaka nataon’ny minisiteran’ny Rano, niaraka tamin’ny Unicef taorian’ny fandalovan’ny rano be, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fiadidian’ny fahasalamana any Maroantsetra, Dr Ralaiarison Dera. Nambaran’ ity farany moa fa ny aretina gripa indray no mirongatra any an-toerana amin’izao fotoana izao. “Voafehy ny aretim-pivalanana ary ambany dia ambany ny taha raha oharina tamin’ny taona lasa raha nandalo ny Enawo. Ny gripa no mamely ny olona aty amin’izao. Tsikaritra izany amin’ny fahamaroan’ny olona voan’ny kohoka, sery ary ny aretim-pisefoana mandalo aty amin’ny tobim-pahasalamana”, hoy ny fanamarihan’ny Dr Ralaiarison Dera.
Mahakasika ny fahasalamana izay hatrany, dia nampitaraina ireo Ray aman-dreny manana zanaka atao vaksiny tany Maroantsetra ny tsy fisian’ny vaksiny Pcv10 sy ny VAR ary ny VPI efa maromaro izay. Fa amin’izao fotoana izao, voalaza fa ho voavaha ny olana satria novinavinaina ho tonga omaly ireo vaksiny ireo.